PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - I-ANC ne-IFP bacula iculo elilodwa ngemeya
I-ANC ne-IFP bacula iculo elilodwa ngemeya
I-ANC ne-IFP eNdumeni sebecula iculo elilodwa mayelana nekusasa lemeya esamisiwe, ye-IFP njengoba bethi ayiphume iphele emkhandlwini ngoba isimoshe kakhulu.
Kungokokuqala ukuba i-ANC ne-IFP bakhulume ngazwi linye ngoMnuz Sboniso Mbatha okumanje ubhekene necala lokuhlela itulo lokubulala uSomlomo uNkk Bongiwe Mbatha Makhathini.
Lawa maqembu akusho lokhu izolo ngemuva kokuthi ngoLwesithathu kube nokhukhulelangoqo wemashi emise idolobha laseDundee umphakathi ukhala ngentuthuko, uchitha nemeya.
USihlalo wekhokhasi ye-ANC eNdumeni uMnuz Sduduzo Mdluli uthe sekuyisikhathi sokuba kulalelwe umphakathi kukhishwe uMbatha.
“Kade sasikhala ngoMbatha singanakwa emkhandlwini. Sikhala nangenkohlakalo yamathenda. Okusijabulisayo ukuthi umeya kuthe uma eboshwa lwavela udaba lwamathenda ukuthi yiwo lawa adale ukuthi agcine esehlela itulo lokubulala uSomlomo,” kusho uMdluli.
Uthe abantu baseNdumeni basakhala ngezimali zabo zokubuyiswa komhlaba, nokungalethwa kwentuthuko. Uveze ukuthi kunohlelo lwezindlu obekumele luqale eminyakeni emithathu eyedlule kodwa namanje aluqali ngenxa yokubanga kwezinkampani okumele zithole ithenda.
UMnuz Xolani Msezana we-IFP eNdumeni uthe bafuna iqembu linyakaze limkhiphe uMbatha ngoba usebafake ehlazweni.
Ukusho lokhu nje ngonyaka odlule bachitha isiphakamiso se-ANC sokuba kukhishwe uMbatha.
USomlomo uMbatha Makhathini, wazisholo yena wathi kudlalwa ngoMbatha ngoba eyingane.
UMsezane uthe i-ANC ikhuluma lokhu abakushoyo nabo kokuthi kukhishwe uMbatha.
“Sekuyisikhathi sokuba aphume nasebukhanseleni ngoba vele wayengawinanga ngisho i-ward. Ngakho uma exoshwa iqembu alizukulimala ngoba uyikhansela eliyiPR. Thina asisho ukuthi iqembu alifake bani kodwa alimkhiphe uMbatha bese lizinqumela ngomuntu oqotho elizosinikeza yena. Le mashi yayizolo ngoLwesithathu ibiyisexwayiso sokuthi siyi-IFP lukhulu luyeza,” kusho uMsezane. UMbatha uthe laba abathi akaphume akabazi futhi ngeke akhishwe yi-ANC esikhundleni. Izolo uthe ubesemhlanganweni wekomiti le-IFP ngakho akekho osamtshele ukuthi akaphume kwesobumeya. Uthe sekuyisikhathi sokuthi basho ukuthi uMsezane abamazi eNkatheni. Uthe kunezinhlelo eziningi zentuthuko anazo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kuboshwe umuntu oyedwa ngodlame emphakathini kodwa izolo isimo besibuyele kwesejwayelekile edolobheni eDundee.